ရနျကုနျဆေးရုံကွီး မှာ အရငျလို ပွှတျသိပျကွပျ နတောမြိုး မရှိတော့ဘူးလို့ ပွောလိုကျ တဲ့ ဒေါကျတာနန်ဒဝငျး – Let Pan Daily
“အသကျတိုငျးကို ထညျ့တှကျပါ” ကူးစကျရောဂါ နှိမျနှငျးရေး လုပျငနျး တဈခု မှာ ဆရာကွီးတဈဦးက ဆုံးမသှားတာပါ။ လူတဈသောငျးဖွဈတာ တဈယောကျပဲသတေယျ ရောဂါဖွဈသူသနှေုနျးCase fatality rate သုည ဒဿမ ဘယျလောကျဘယျလောကျ လို့ ယဘေုယြ ခွုံငုံပွောဖွသေိမျ့ကနြေပျလို့ရပမေယျ့ အဲဒီသဆေုံးသှားတဲ့ သူ မိသားစုအတှကျကတော့ ၁၀၀% ဆုံးရှုံးမှုပါပဲ။ အစားထိုးမရတဲ့ ဆုံးရှုံးမှုပါပဲ။ လူနာတိုငျး ကတော့ သူတို့ မိသားစုတိုငျးအတှကျ VIP ပါပဲ။ လူတိုငျးရဲ့ သောက နဲ့ ဆန်ဒ ကို နားလညျပေးလိုကျပါ။ တနျးတူညီမြှ Equality ပေးသငျ့တဲ့နရောမှာပေးနိုငျအောငျ သာတူညီမြှ Equity ပေးသငျ့တဲ့နရောမှာ ပေးနိုငျအောငျ ကုသရေး မှာရော ကာကှယျရေးမှာရော SOP တှေ Protocol တှရှေိပါစေ။
ရငျထဲမှာ ဆှဲသှားတဲ့ ဆုံးမစကားတှကွေောငျ့ ခုရကျပိုငျး အတှငျး အတျော့ကို နှလုံးသှငျး မှနျအောငျ နနေိုငျခဲ့ပါတယျ။ ဆေးရုံအတှကျ လိုအပျခကျြတှေ လှူပေးနတေဲ့အလှူရှငျ အမကွေီး၊ ဆရာဝနျ ဆရာမတှေ အတှကျ သူ့ပိုငျတိုကျခနျးကို အခမဲ့နခှေငျ့ပေးပွီးနစေ့ဉျခကျြပွုတျကြှေးနတေဲ့အမ၊ ညီအကိုလိုခငျနတေဲ့ သတငျးအယျဒီတာအမတျလောငျး၊ ဌာနတဈခုက အဆငျ့မွငျ့ အရာရှိတဈဦးရဲ့ မိခငျ၊ သူငယျခငျြးအရငျးခေါကျခေါကျရဲ့ ဦးလေး၊ လုပျအားပေးလူငယျရဲ့အဘှား၊ ကြှနျတျော့ဆရာမရဲ့ သူငယျခငျြး၊ ကြှနျတျော့ ဖခငျရဲ့ မိတျဆှေ၊ ကြှနျတျော့အဒျေါရဲ့တပညျ့၊ အသိတဈယောကျရဲ့ ဘာသာရေး လေးစားရသူ စသညျစသညျဖွငျ့ ခငျမငျရသူ ခဈြခငျရသူ ကြေးဇူးရှိသူ အားလုံး အားလုံး အရေးပျေါကိုရောကျလာတဲ့အခါ ကြှနျတျော့မှာ အလုပျတှေ ပငျပနျးမှုတှေ ဖိစီးမှုတှေ ရှိနပေါစေ အတတျနိုငျဆုံး ကိုယျစီကိုယျစီရဲ့ လိုအပျခကျြတှေ ပွောကွားခကျြတှကေို နားထောငျကူညီပေးနိုငျအောငျ ကွိုးစားခဲ့ပါတယျ။
မသိမသာ ရော သိသိ သာသာပါ ရနျတှေ့ တတျသူတှေ နားလညျပေး သူတှေ ဖိအားပေးသူတှေ စာနာတတျသူတှ အားလုံး အားလုံးပေးတဲ့ ခံစားခကျြတှကေို ကုလ လာဘ ဘယ ကငျးစှာ သဒ်ဓါ အားဖွငျ့ ခံယူလကျြပါ။ ဝနျနှငျ့အားနှငျ့မမြှစှာ ပငျပနျးစှာ စောငျ့ရှောကျမှုပေးနတေဲ့ ဆရာဝနျ ဆရာမတှလေညျး ဖိအားမဖွဈအောငျ အသီးသီးရဲ့ ဆန်ဒလေး တှလေညျး ပွညျ့အောငျ ရောဂါ အနအေထားပျေါမူတညျပွီး ကနျြခံစားနရေသူမြားလညျး သူတို့ကို ဦးစား ပေးတာကွောငျ့ ဘေးဖယျခံရခွငျးမဖွဈရအောငျ ကွိုးစားစီမံပေးပါတယျ။ ကနြေပျသှားသူတှေ ရှိသလို မကနြေပျသူတှလေညျး ရှိနိုငျပါတယျ။ မကနြေပျသူ တဈယောကျခွငျးစီတိုငျးကို အနူးအညှတျ တောငျးပနျပါတယျ။ အားလုံးပွလေညျအောငျ အထကျက စခေိုငျးတဲ့ တာဝနျရော လုပျဆောငျရငျးတှကွေုံ့ရတဲ့ အလုပျတှကေိုရော ပွညျ့စုံအောငျ ရှိတဲ့ အငျအား စုမိတဲ့ အား နှငျ့ အကောငျးဆုံး ကွိုးစားနရေပါတယျ။
ခုဆိုရငျ ဟိုးအရငျကလိုတော့ ပွှတျသိတျကွပျမနတေော့ပါဘူး။ နစေရာမရှိလို့ ကွမျးခငျးပျေါ ခြ အိပျနရေတာမြိုး ကုလားထိုငျလေးပျေါ ကြုံ့ကြုံ့လေး နရေတာမြိုး မရှိတော့ပဲ လူတိုငျး ကုတငျပျေါတော့ ရောကျအောငျ ပါမောက်ခခြုပျကွီးဒေါကျတာဇျောဝစေိုး နှငျ့ ဆေးရုံအုပျကွီး(ဒုခြုပျ) ဒေါကျတာ မွငျ့မွငျ့အေး တို့ ဦးဆောငျတဲ့ အဖှဲ့က စီမံနိုငျခဲ့ပါပွီ။ ရောကျလာသမြှသော လူနာတိုငျးကို အဆငျပွစေရေနျ ရနျကုနျဆေးရုံကွီးက ကွိုးစားနပေါတယျ။ ကုတငျပွညျ့နလေို့ လူမြားလို့ဆိုပွီး ငွငျးဆနျတာမရှိတဲ့အခါ ရောဂါ ပွငျးထနျမှု အနအေထားပျေါမူတညျပွီး ဦးစားပေးစနဈကို ဆောငျရှကျပါတယျ။ ဉပမာ အသကျ ၈၂ နှဈ အမကွေီး အစာအိမျပေါကျနတေယျလို့ အဖွသေိပွီး ကွိုတငျဆကျသှယျထားတဲ့ ကိုဗဈပိုးတှလေူ့နာကို လူနာတငျယာဉျနှငျ့ သူ့ကို ခှဲစိတျကုသပေးမယျ့အဆောငျ အနားအထိ တနျးသယျပို့တာမြိုးလုပျပေးပါတယျ။ တဆငျ့ဆငျ့ စဈဆေးတဲ့အဆငျ့တှကေို ကြှနျတျောတို့ လကျထောကျဆရာဝနျလေးတှပေဲ လိုကျလုပျပေးတာမြိုးရှိပါတယျ။ ဆိုခဲ့သလိုပါပဲ “လူနာတိုငျး ကတော့ သူတို့အိမျမှာ အရေးကွီးပုဂ်ဂိုလျပါပဲ” ကြှနျတျောတို့ကလညျး ထပျဆိုပါရစေ လူနာတိုငျးဟာ ကြှနျတျောတိုအတှကျ အရေးကွီးပုဂ်ဂိုလျ တှပေါခငျဗြာ….
“အသက်တိုင်းကို ထည့်တွက်ပါ” ကူးစက်ရောဂါ နှိမ်နှင်းရေး လုပ်ငန်း တစ်ခု မှာ ဆရာကြီးတစ်ဦးက ဆုံးမသွားတာပါ။ လူတစ်သောင်းဖြစ်တာ တစ်ယောက်ပဲသေတယ် ရောဂါဖြစ်သူသေနှုန်းCase fatality rate သုည ဒဿမ ဘယ်လောက်ဘယ်လောက် လို့ ယေဘုယျ ခြုံငုံပြောဖြေသိမ့်ကျေနပ်လို့ရပေမယ့် အဲဒီသေဆုံးသွားတဲ့ သူ မိသားစုအတွက်ကတော့ ၁၀၀% ဆုံးရှုံးမှုပါပဲ။ အစားထိုးမရတဲ့ ဆုံးရှုံးမှုပါပဲ။ လူနာတိုင်း ကတော့ သူတို့ မိသားစုတိုင်းအတွက် VIP ပါပဲ။ လူတိုင်းရဲ့ သောက နဲ့ ဆန္ဒ ကို နားလည်ပေးလိုက်ပါ။ တန်းတူညီမျှ Equality ပေးသင့်တဲ့နေရာမှာပေးနိုင်အောင် သာတူညီမျှ Equity ပေးသင့်တဲ့နေရာမှာ ပေးနိုင်အောင် ကုသရေး မှာရော ကာကွယ်ရေးမှာရော SOP တွေ Protocol တွေရှိပါစေ။
ရင်ထဲမှာ ဆွဲသွားတဲ့ ဆုံးမစကားတွေကြောင့် ခုရက်ပိုင်း အတွင်း အတော့်ကို နှလုံးသွင်း မှန်အောင် နေနိုင်ခဲ့ပါတယ်။ ဆေးရုံအတွက် လိုအပ်ချက်တွေ လှူပေးနေတဲ့အလှူရှင် အမေကြီး၊ ဆရာဝန် ဆရာမတွေ အတွက် သူ့ပိုင်တိုက်ခန်းကို အခမဲ့နေခွင့်ပေးပြီးနေ့စဉ်ချက်ပြုတ်ကျွေးနေတဲ့အမ၊ ညီအကိုလိုခင်နေတဲ့ သတင်းအယ်ဒီတာအမတ်လောင်း၊ ဌာနတစ်ခုက အဆင့်မြင့် အရာရှိတစ်ဦးရဲ့ မိခင်၊ သူငယ်ချင်းအရင်းခေါက်ခေါက်ရဲ့ ဦးလေး၊ လုပ်အားပေးလူငယ်ရဲ့အဘွား၊ ကျွန်တော့်ဆရာမရဲ့ သူငယ်ချင်း၊ ကျွန်တော့် ဖခင်ရဲ့ မိတ်ဆွေ၊ ကျွန်တော့်အဒေါ်ရဲ့တပည့်၊ အသိတစ်ယောက်ရဲ့ ဘာသာရေး လေးစားရသူ စသည်စသည်ဖြင့် ခင်မင်ရသူ ချစ်ခင်ရသူ ကျေးဇူးရှိသူ အားလုံး အားလုံး အရေးပေါ်ကိုရောက်လာတဲ့အခါ ကျွန်တော့်မှာ အလုပ်တွေ ပင်ပန်းမှုတွေ ဖိစီးမှုတွေ ရှိနေပါစေ အတတ်နိုင်ဆုံး ကိုယ်စီကိုယ်စီရဲ့ လိုအပ်ချက်တွေ ပြောကြားချက်တွေကို နားထောင်ကူညီပေးနိုင်အောင် ကြိုးစားခဲ့ပါတယ်။
မသိမသာ ရော သိသိ သာသာပါ ရန်တွေ့ တတ်သူတွေ နားလည်ပေး သူတွေ ဖိအားပေးသူတွေ စာနာတတ်သူတွ အားလုံး အားလုံးပေးတဲ့ ခံစားချက်တွေကို ကုလ လာဘ ဘယ ကင်းစွာ သဒ္ဓါ အားဖြင့် ခံယူလျက်ပါ။ ဝန်နှင့်အားနှင့်မမျှစွာ ပင်ပန်းစွာ စောင့်ရှောက်မှုပေးနေတဲ့ ဆရာဝန် ဆရာမတွေလည်း ဖိအားမဖြစ်အောင် အသီးသီးရဲ့ ဆန္ဒလေး တွေလည်း ပြည့်အောင် ရောဂါ အနေအထားပေါ်မူတည်ပြီး ကျန်ခံစားနေရသူများလည်း သူတို့ကို ဦးစား ပေးတာကြောင့် ဘေးဖယ်ခံရခြင်းမဖြစ်ရအောင် ကြိုးစားစီမံပေးပါတယ်။ ကျေနပ်သွားသူတွေ ရှိသလို မကျေနပ်သူတွေလည်း ရှိနိုင်ပါတယ်။ မကျေနပ်သူ တစ်ယောက်ခြင်းစီတိုင်းကို အနူးအညွတ် တောင်းပန်ပါတယ်။ အားလုံးပြေလည်အောင် အထက်က စေခိုင်းတဲ့ တာဝန်ရော လုပ်ဆောင်ရင်းတွေ့ကြုံရတဲ့ အလုပ်တွေကိုရော ပြည့်စုံအောင် ရှိတဲ့ အင်အား စုမိတဲ့ အား နှင့် အကောင်းဆုံး ကြိုးစားနေရပါတယ်။
ခုဆိုရင် ဟိုးအရင်ကလိုတော့ ပြွတ်သိတ်ကြပ်မနေတော့ပါဘူး။ နေစရာမရှိလို့ ကြမ်းခင်းပေါ် ချ အိပ်နေရတာမျိုး ကုလားထိုင်လေးပေါ် ကျုံ့ကျုံ့လေး နေရတာမျိုး မရှိတော့ပဲ လူတိုင်း ကုတင်ပေါ်တော့ ရောက်အောင် ပါမောက္ခချုပ်ကြီးဒေါက်တာဇော်ဝေစိုး နှင့် ဆေးရုံအုပ်ကြီး(ဒုချုပ်) ဒေါက်တာ မြင့်မြင့်အေး တို့ ဦးဆောင်တဲ့ အဖွဲ့က စီမံနိုင်ခဲ့ပါပြီ။ ရောက်လာသမျှသော လူနာတိုင်းကို အဆင်ပြေစေရန် ရန်ကုန်ဆေးရုံကြီးက ကြိုးစားနေပါတယ်။ ကုတင်ပြည့်နေလို့ လူများလို့ဆိုပြီး ငြင်းဆန်တာမရှိတဲ့အခါ ရောဂါ ပြင်းထန်မှု အနေအထားပေါ်မူတည်ပြီး ဦးစားပေးစနစ်ကို ဆောင်ရွက်ပါတယ်။ ဉပမာ အသက် ၈၂ နှစ် အမေကြီး အစာအိမ်ပေါက်နေတယ်လို့ အဖြေသိပြီး ကြိုတင်ဆက်သွယ်ထားတဲ့ ကိုဗစ်ပိုးတွေ့လူနာကို လူနာတင်ယာဉ်နှင့် သူ့ကို ခွဲစိတ်ကုသပေးမယ့်အဆောင် အနားအထိ တန်းသယ်ပို့တာမျိုးလုပ်ပေးပါတယ်။ တဆင့်ဆင့် စစ်ဆေးတဲ့အဆင့်တွေကို ကျွန်တော်တို့ လက်ထောက်ဆရာဝန်လေးတွေပဲ လိုက်လုပ်ပေးတာမျိုးရှိပါတယ်။ ဆိုခဲ့သလိုပါပဲ “လူနာတိုင်း ကတော့ သူတို့အိမ်မှာ အရေးကြီးပုဂ္ဂိုလ်ပါပဲ” ကျွန်တော်တို့ကလည်း ထပ်ဆိုပါရစေ လူနာတိုင်းဟာ ကျွန်တော်တိုအတွက် အရေးကြီးပုဂ္ဂိုလ် တွေပါခင်ဗျာ….
ကျောင်းတွေ ပြန်ဖွင့် မယ့် အပေါ် ကျောင်းသားမိဘ တဦး ရဲ့ ရင်ထဲ က ဖွင့်ဟ ဝန်ခံချက်